Ch 15 यूहन्ना – 2माछा
घर / बाइबल / यूहन्नाको सुसमाचार / Ch 15 यूहन्ना
15:1 "म साँचो दाखको बोट हुँ, र मेरो बुबा vinedresser छ.
15:2 फल फलाउन गर्दैन मलाई हरेक शाखा, उहाँले टाढा हुनेछ. र प्रत्येक एक भालु फल गर्छ कि, उहाँले शुद्ध हुनेछ, यो निस्कने थप फल ल्याउन सक्छ भनेर.
15:3 अब तपाईं सफा छन्, किनभने म तपाईंलाई भनिएको छ कि शब्द को.
15:4 मलाई पालन, र तपाईं म. शाखा नै फल फलाउन सक्षम छैन जसरी, यो दाखको मा abides नभएसम्म, त्यसैले पनि असमर्थ छन्, तपाईं मलाई पालन नगरेसम्म.
15:5 म दाखको बोट हुँ; तपाईं शाखा छन्. जसले मलाई abides, र उसलाई म, धेरै फल फलाउँछ. मलाई बिना लागि, तपाईं केही गर्न सक्षम छन्.
15:6 कसैले मलाई मा पालन गर्दैन भने, उहाँले टाढा फालिनेछ, एक शाखा जस्तै, र उहाँले सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो हुनेछ, र तिनीहरूले उहाँलाई भेला र आगोमा उहाँलाई डाली हुनेछ, र उहाँले बल्छ.
15:7 तपाईं मलाई पालन भने, र मेरो शब्दहरू तपाईंलाई पालन, त्यसपछि तपाईं को लागि अनुरोध गर्न सक्छ जो तपाईं हुनेछ, र यो तपाईं को लागि गरेको गरिनेछ.
15:8 यस, मेरो बुबा महिमा छ: तपाईं धेरै फल निस्कने ल्याउन र मेरो चेला बन्न पर्छ भनेर.
15:9 बुबाले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ रूपमा, त्यसैले म प्रेम छ. मेरो प्रेममा पालन.
15:10 यदि तिमी मेरो आदेशहरू पालन, तपाईं मेरो प्रेममा पालन गर्नेछु, म पनि मेरो पिताको आदेश पालन गरेको छु बस र म उहाँको प्रेम पालन.
15:11 म तपाईंलाई भनिएको छ यी कुराहरू, त्यसैले मेरो आनन्द तपाईंलाई हुन सक्छ कि, र आफ्नो आनन्द पूरा हुन सक्छ.
15:12 यो मेरो precept छ: भनेर एक आपसमा प्रेम, म तपाईंलाई प्रेम गरेझैं.
15:13 कसैले पनि यो भन्दा एक ठूलो प्रेम छ: उहाँले आफ्नो मित्र लागि आफ्नो जीवन राख्नु भनेर.
15:14 तपाईं मेरो साथी हो, तपाईं के भने म के तपाईं निर्देशन.
15:15 म अब तपाईं सेवकहरू कल हुनेछ, लागि सेवक थाहा छैन आफ्नो प्रभु के गरिरहेको छ. तर म साथी भनिन्छ छन्, किनभने म मेरो पिता सुनेको छ कि पाठका सबै, म तिमीहरूलाई प्रकट गरेको छु.
15:16 तपाईंले मलाई रोज्नु भएको छैन, तर म तपाईं रोजेको. र म तपाईंलाई नियुक्त गरेका छन्, त्यसैले तपाईं निस्कनेछ र फल फलाउन सक्छ कि, र यति आफ्नो फल पछिल्लो सक्छ कि. त्यसपछि जे तिमी मेरो नाम मा पिताको आग्रह गरेका छन्, उहाँ तिमीहरूका दिन हुनेछ.
15:17 यो म तपाईं आदेश: भनेर एक आपसमा प्रेम.
15:18 संसारको तपाईं घृणा भने, know that it has hated me before you.
15:19 If you had been of the world, the world would love what is its own. यद्यपि साँच्चै, you are not of the world, but I have chosen you out of the world; किनभने यो, the world hates you.